Ziziphi I Amava Best ukuba In Switzerland | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Ziziphi I Amava Best ukuba In Switzerland
Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 06/11/2020)
Ah, Swizalend, ilizwe elihle nelinoxolo lihleli kamnandi phakathi ElamaTaliyane, Fransi , yaye Jemani . Kufanelekile ukuba undwendwele ukuze ubone ukuba kutheni iSwitzerland ilinganiswa ngokungagungqiyo njengelinye lawona mazwe onwabileyo emhlabeni. Ngoko ke yintoni Ucinga ntoni xa ucinga 'Swizalend'? I am sithandabuze iincopho zekhephu, cheese, kunye chocolate. Kuya kubakho ukudla ixesha iilekese, fondue kwi Swiss wakho vacay, kodwa qiniseka ukuba ibandakanye zonke izinto zenkcubeko, zemvelo, ne zembali eli lizwe ukuba anikele. Ukususela ekhwela Uloliwe uyindumasi entabeni ngezikaTshiwo ukuya ukwakhiwa kwemihlathi-siyeka, Switzerland linako norhuma uhlobo umhambi ngexesha lonke ixesha. Makhe Yodilizwa ezinye kufuneka lwedilesi ye yakho uhambo ku Switzerland.
umdla Train yindlela emangalisayo ukubona eli lizwe lincinane. Ukuqesha imoto nokukhubeka indlela kungaba yindlela bhetele zezithuthi kumazwe amaninzi, kodwa ehamba ngololiwe e Switzerland kuyinto engamava lenkundla! Oololiwe zicocekile, ngexesha, ahambe ezinye kakhulu ezinobuhle obumangalisayo emhlabeni. Ngaphezu, ezinye iindlela ukuqeqesha kufuneka kakhulu kakuhle walondoloza, iimoto Uloliwe uyimbali eya kukwenza uzive ngathi ngaba ufumene movie endala! Ezinye iindlela ezininzi idumileyo ziquka Jungfraujoch, i GoldenPass Line, kunye Glacier Express. Ezinye zezi ndlela ziqukiwe kunye Eurail Pass, kwaye ezinye izinto akuyi kunikela izaphulelo ukuba abanini Eurail Pass. Koololiwe Switzerland alusoloko cheap, ukuze a isicwangciso esincinane kusengaphambili kunokukunceda ugcine ezinye Francs, nokuba wena abahambahambayo cross-lizwe okanye ukuthatha nje uhambo losuku!
Isiseko sokuNqamlezwa nguLoliwe
IBern yokuThunyelwa nguLoliwe
I-Lucerne yokuThunyelwa nguLoliwe
I-Zurich yokuThunyelwa nguLoliwe
I-Swiss Alps ungomnye kakhulu lenkundla kuyiwa khona ebusika ezemidlalo emhlabeni. Cinga iintsuku kumathambeka, nobusuku zijonge phezulu kunye ikomityi efudumeleyo yeti kunye isitya evuthayo nesuphu obufana. Ukuba ukusuka nemozulu efudumeleyo yaye andizange skied ngaphambili, uhambo zobusika oku kusenokubonakala nje ngathi into oyibona bhanyabhanya. Unako bafunde ski nanini ebomini bakho kunye Switzerland unemisebenzi zokulala ukuba ilungele abaqalayo, kunye nezifundo ski neenduli bunny. iiholide abaninzi baze izifundo ze abantwana, ekwenzeni Switzerland a indawo kakhulu iintsapho ukuya kuhambo ski!
I-Zurich ukuya kwitikiti laseSt
I-Zermati ukuya kwitikiti lase-St Moritz
Itikiti laseLyon ukuya eSt Moritz
I-Basel ukuya e-St Moritz itikiti lesitimela
Caves are hayi into yokuqala ndacinga xa uhlela uhambo lwam eSwitzerland mhlawumbi. kunjalo, Switzerland iye nemiqolomba ezininzi ezintle umdla ukutyelela, ingakumbi ngexesha kwiinyanga zasehlotyeni ukufudumala.
I-Zurich ukuya kumaxesha eZitimela zeZermatt
IGeneva ukuya kumaxesha eZitimela zeZermatt
UBern ukuya eZermatt amaxesha oLoliwe
Lucerne ukuya eZermatt amaxesha oLoliwe
Le incipha enkulu a echibini yaye yewayini ngaphakathi ukuba ungakwazi ukumelana ngayo 400 abantu kwaye ziyaqashwa iziganeko ezifana nezidlo Buffet, amaqela, nemitshato. Iziganeko khona lungafaka uDJ, ukuwina, nabaculi. Unako ukuthatha uloliwe wembali ukusuka Vitznau ukuya kwindawo ekhethekileyo. website sabo kuphela in German, kodwa ungasebenzisa iGoogle Chrome ukukhangela naziphi na iwebhusayithi zolwimi lwangaphandle ngolwazi oluthe kratya lokuhamba- ungavula uguqulelo oluzenzekelayo!
st. happy Qaphela
i St. Beatus nomqolomba izandla phantsi enye iinkqubo emqolombeni onomtsalane kweli lizwe. Vula ukusuka ekuqaleni iveki of EyoKwindla ukuya kwiveki yokuqala ka-Oktobha, le yindawo egqibeleleyo kubantu okanye amaqela uhambele entshonalanga Switzerland kule nyanga zishushu enyakeni. Unga ukuhlola emqolombeni kuphela, okanye bangenele kwenye guided ukhenketho ukuba kwenzeka rhoqo imini yonke. Izinja bavumelekile ukuba basebenze nawe emqolombeni ngokunjalo, kodwa kuya kufuneka uthenge itikiti yokungena kubo! Okuqukiweyo ixabiso lokungena (kuphela abantu, uxolo) na ukwamkelwa St Beatus mqolomba museum, leyo uya kunifundisa le imbali, uncwadi lwemveli, yokwakheka komhlaba yenkqubo emqolombeni!
Titlis Glacier Irholo
Lo yenzelwe kwiinyanga zasebusika. nemiqolomba Glacier, eyaziwa ngokuba ice nemiqolomba, akuvamanga lo ziyafikeleleka. Ukutyelela kule umqolomba otherworldy eyenziwe ice wamandulo kumelwe ukuba umntu Ukuskiya kufuphi Engelberg. Bundle phezulu yakho zikhuthazayo iimpahla zasebusika traipse kwimizila blue-hued emqolombeni awazenza ngokupheleleyo ice!
Ndwendwela Enye A Uhlobo Museum
Wonke umzi omkhulu a imbali okanye imyuziyam yesayensi emnandi kakhulu ukuqhekeka kwesixeko neentsuku zemvula. kunjalo, abanye kuyo baye ngokwenene iimyuziyam unique ukuba nje akufuneki ukuba awukho. Abantu zivela kulo lonke ihlabathi atyelele H.R. Geiger Museum Igruyere.
H.R. Geiger i igcisa odumileyo Swiss leyo eyaziwa kakuhle ehlabathini jikelele ngenxa yomsebenzi wakhe wokufa kunye lwekamva. Mhlawumbi uyazi ukuba wegcisa wadala izidalwa kwi movie Alien. Ukuba uthanda engaqhelekanga, quirky art hlala kwi Geiger Museum kwaye alandele phezulu kunye cocktail kwi bar Geiger spiral ivenkile elandelayo. Akazazi art yakhe? Thatha uhambo olubonakalayo imyuziyam phambi kokuba uye.
I-Zurich ukuya eGeneva amaxesha oLoliwe
IParis ukuya eGeneva amaxesha oLoliwe
I-Lucerne ukuya eGeneva amaxesha oLoliwe
Balila The Home of Fondue
Fondue is enye izitya edume ukuba uphume Switzerland, yaye oku akukho ngozi. Abantu abadla sisi zazamazama kwembiza zoluntu kangangamakhulu eminyaka entshonalanga inxalenye isiFrentshi othetha of Switzerland. kunjalo, ku 1930 i Swiss Union isonka samasi ngamandla ethengisiweyo le ngesitya zombini kuzwelonke nakumazwe ngamazwe, esivakalisa esityeni yesizwe Switzerland njengendlela yokuthengisa ngokugqithiseleyo yelizwe cheese. Kwaye siyavuya ukuba benza ezi, ngubani akayithandi sisi zaphela kunye nesonka? Ukumatanisa fondue yakho elomileyo iwayini emhlophe, uze uqiniseke ukuba kabini elimandla!
I-Basel ukuya kwiZurich amaxesha oLoliwe
I-Basel ukuya eGeneva amaxesha oLoliwe
I-Basel ukuya kumaxesha oLoliwe aThixeneyo
I-Basel ukuya eBern amaxesha oLoliwe
Musa ukulibala Malunga Chocolate
lixesha lokuba real isizathu sokuba uye eSwitzerland – itshokholethi! Switzerland kakhulu idume itshokolethi yayo, kwaye unokufumana uninzi lweetshokholethi zodidi kwiikona zezitalato naphi na kwilizwe, kunjalo, Zurich idume ngokhenketho zayo ezininzi chocolate. Kukho ukhenketho lwetshokholethi ukuya lwanele lonke uhlahlo-lwabiwo mali! Ungathatha uMgqibelo uhambo lokuhamba kusasa edibanisa izinto eziphambili zedolophu nezinye zeetshokholethi ezigqwesileyo edolophini. Usenokuzama ukuthatha uhambo-mveliso encinane itshokolethi, yaye amava ukwenza eyakho ibha yetshokholeyithi. Kuba umsebenzi zasehlotyeni kangaka ngokwenene, ukuthatha itshokolethi hambo ngesikhephe kwi Mari and Sprungli umzi-mveliso.
Iguqulwe kumaxesha eTreyini eZurich
Lucerne ukuya eZurich amaxesha oLoliwe
UBern ukuya eZurich amaxesha oLoliwe
IGeneva ukuya eZurich amaxesha oLoliwe
Yiya Top of Europe
Kulungile, ngoku ukuba zigcwaliswe kwaye chocolate kunye netshizi, lixesha lokuba ukukwazi kwakhona! ke iintaba Swiss nje Ukuskiya ebusika! Nazi ehlobo omangalisayo ukuba ungaya kwi ngeenxa zonke elizweni, kodwa ummandla Jungfrau kufuneka ibe phezulu kuluhlu lwakho emele. I Jungfraujoch yeyona ndawo iphakamileyo baseYurophu 3,454 mitha (~ 11.330 ezinyaweni) kwaye umbono kufuneka ukuba awukho. Kukho uloliwe oza kukusa apho unyaka wonke ukuba awunguye umakhenkethi omkhulu, okanye obekelo kude ngexesha ebusika. Ukuba i lucelomngeni khangela ezinye zezi ndlela kule ndawo. Uninzi iindlela kuhlaziywe ulwabiwo lwezithuba zamaziko ukutya neziselo entle endleleni, ukuze ungakhathazeki, akuyi kufuneka ukuba rough!
Ingaba unayo nayiphi na indawo ozithandayo e Switzerland? Sazise kwaye Musa ukulibala, le website engcono Order Trains amatikiti yi Gcina A Isitimela
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi kunye sinike nje ngetyala nesihlanganisi kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-experiences-switzerland-winter-summer%2F - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#isisse #isixhosa indawo yokuhamba